သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၈-၆) ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
Author: lu bo | 9:36 PM | No မှတ်ချက် | သစ်ထူးလွင်
နစ်နာသူများ အမှု မဖွင့်လို့ အရေးယူစရာ အစီအစဉ်မရှိ
မြန်မာနိုင်ငံသား မူးယစ်ဆေး သယ်ဆောင်လာသူများအား ထိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ က သုဝဏဘူမိ လေဆိပ်မှာ ဖမ်းဆီးမိ
ပျက်ကျခဲ့သည့် ထိုင်းရဟတ်ယာဉ် ကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့ များက ရှာတွေ့ 
လျှပ်စစ်မီးပြုပြင်ရာမှ အမျိုးသားတစ်ဦး ဓာတ်လိုက်သေဆုံး
ယနေ့ မန္တလေး လုယက်မှုနဲ့ facebook ပေါ်မှ ရိုက်ခတ်သံ
အရှိန်မထိန်းနိုင်သည့်ကား မီးပွိုင့်၊ လမ်းဘေးအုတ်ခုံနဲ့ လျှပ်စစ်မီးတိုင်အပြင် ကျောင်းသူတစ်ဦးပါ တိုက်မိ
၃လမ်းသွား လမ်းမကြီး တစ်ခုလုံး ပြည့်အောင် ၃ ထပ်ပိတ်ရပ်၍ လူတင်ခွင့်ရှိသော
ရန်ကုန်မြို့မှ Bus ကားများနှင့် facebook ပေါ်မှ ရိုက်ခတ်သံ
စစ်တွေမှ ဘူးသီးတောင်သို့ ပို့ဆောင်မည့် မူးယစ်ဆေးဝါးများအား ဖမ်းမိ
စာမေးပွဲတွင် လိမ်လည် ဖြေဆိုပြီး ပထမ ရရှိခဲ့သည့် မိန်းကလေးအား အိန္ဒိယ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဖမ်းဆီး
ကလေးနှင့် တမူးမြို့တွင် အလှူခံနေသည့် ရသေ့ဟန်ဆောင်သူနှစ်ဦးအား ဖမ်းဆီးကာ ထောင်ဒဏ်နှစ်နှစ် ချမှတ်
ဆယ်ကျော်သက် မိန်းမပျိုတစ်ဦးအား ပထွေးမှသားမယားအဖြစ် အကြိမ်ကြိမ်ပြုကျင့်မှု မိခင်က တိုင်ကြား
လေဒီဂါဂါ ကို တရုတ်ပရိသတ် ဒေါသတကြီးတုံ့ပြန်
သံတမန်တွေကို ရုရှ နှောင့်ယှက်နေတယ်လို့ အမေရိကန် ပြော
မိမိတို့ အစိုးရအနေနဲ့လျှို့ ဝှက် ရည်မှန်းချက်များ မရှိ တက်တက်ကြွကြွလုပ်ဆောင်လျှင် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် မုချ အောင်မြင်မည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြား
အသနားခံစာတင်မယ်လို့ ရိုးရိုးလေးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ပြော
NLD ဗဟိုကော်မတီက ရွေးချယ်လိုက်သည့် ပြည်ထောင်စုအဆင့်နှင့် တိုင်းအဆင့်ပုဂ္ဂိုလ်အချို့ အောက်ခြေလွတ်နေဟု ဦးဝင်းထိန်ပြော
ကိုလံဘီယာ တွင် စစ်ရဟတ်ယာဉ် ပျက်ကျမှု ကြောင့် ၁၇ ဦး သေဆုံးကြောင်း စစ်တပ် အတည်ပြု နမ္မတူမြို့နယ် အတွင်းရှိ RCSS/SSA အား အစိုးရတပ်မတော် စစ်ကြောင်း ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်
ကော့ကရိတ် နှင့် ညီနောင်ကြား ယာဉ်မတော်တဆမှုဖြစ်
Posted: 28 Jun 2016 07:23 AM PDT
ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား ဂေါပကအဖွဲ့ကို အဖွဲ့ဝင် (၁၅) ဦးနဲ့ အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီကိစ္စကို ဇွန်လ (၂၇) ရက်က
နေပြည်တော် သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးမှာ ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်တွင်းပြည်ပဆက်ဆံရေးနှင့် ပြန်ကြားရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်ဆန်းဝင်းက ပြောပါတယ်။
လက်ရှိ ဂေါပကကို ယာယီဂေါပကအဖြစ် ဖွဲ့စည်း
Posted: 28 Jun 2016 07:19 AM PDT
ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဲခူးတိုင်း ဝေါမြို့နယ်ထဲက သူရဲသမိန်ကျေးရွာကို ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်က
လိုက်လံစစ်ဆေးနေစဉ်။ Photo: Myo Zaw Ko/ RFA
ဝေါမြို့နယ် သူရဲသမိန်ကျေးရွာမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျူးလွန်သူ တွေကို ဥပဒေကြောင်းအရ ဖေါ်ထုတ် အရေးယူဖို့ အစီအစဉ် မရှိဘူးလို့ ပဲခူးတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကြီး မျိုးမင်းထိုက် က
Posted: 28 Jun 2016 07:08 AM PDT
ထိုင်းနိုင်ငံက ၀ိတ်ချဆေးကိုမှာ ယူစားသုံးခြင်းကြောင့် ဂျပန်အမျိုးသမီး ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးသည့်နောက် ၀ိတ်ချဆေး အန္တရာယ်ရှိကြောင်း ဂျပန်အစိုးရနှင့်
ဂျပန်ဆရာဝန်များအဖွဲ့က ဂျပန်ပြည်သူတွေကို သတိပေးလိုက်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံးဝိတ်ချနည်းလမ်းက အစားအစာကို ဆင်ခြင်စားသုံးပြီး အားကစားပုံမှန်လုပ်ခြင်းက အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပဲဆိုတာကို သိထားသင့်တယ် ချက်ချင်းလက်ညှင်းဝိတ်ကျမှု မသိသာသော်လည်း ဖြေးဖြေးချင်းစီနဲ့ကျပြီး ကို
Posted: 28 Jun 2016 06:40 AM PDT
နိပေါနိုင်ငံသား တစ်ဦးနဲ့မြန်မာ နိုင်ငံသား နှစ်ဦး (အမျိုးသမီးတဦးပါဝင်) တို့ ကို မူးယစ်နိမ်နင်းရေး ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ တွေကဖေါ်ထုတ် ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း ဘန်ကောက်ပိုစ့် သတင်းမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကူး စာအုပ်နဲ့ရန်ကုန်ကနေ ဘန်ကောက်မြို့ကိုမူးယစ်ဆေး ၀ါးတွေ သယ်လာသူ အနဲ Anil, အသက် 22 ကို စိတ်ကြွဆေး ၇.၃ ကီလိုနဲ့ အတူ သုဝဏဘူမိ နိုင်ငံတကာလေဆိပ်မှာ ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့ က စတင် ဖမ်း
Posted: 28 Jun 2016 06:35 AM PDT
ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့ ကတဲက ထိုင်းနိုင်ငံ ကျန်ထဘူရီ တောင်တန်းများပေါ်မှာ ပျက်ကျသွားခဲ့တဲ့ ရဟတ်ယာဉ်နဲ့လိုက်ပါသွားသူတွရဲ့အလောင်းတွေကို ရှာဖွေတွေ့ ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ရဟတ်ယာဉ်မောင်း သူ နှစ်ဦးနဲ့စက်ပြင်တဦးတို့ ရဲ့ အလောင်းတွေကို ရှာ တွေ့ ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် ။ (၃)ရက်ကြာ စစ်တပ်ဖွဲ့ ဝင် ၁၀၀ ကျော်နဲ့ ရွာ သားတွေ ပါ တောနင်းရှာဖွေခဲ့ရပါတယ်။
ပျက်ကျတဲ့ရဟတ်ယာဉ်ဟာ ရာသီဥတု ဆိုးဝါးနေချိ
Posted: 28 Jun 2016 06:25 AM PDT
ရန်ကုန် - မန္တလေး မြို့ရှောင်လမ်း ဖောက်လုပ်ခဲ့စဉ်က သိမ်းယူခဲ့တဲ့ လယ်မြေတွေအတွက် နေပြည်တော် ပျဉ်းမနားမြို့နယ် က တောင်သူတွေကို ဇွန်လ ၂၈ ရက်ေန့က အစိုးရ လျော်ကြေးပေးစဉ်။ Photo: Win Naung Toe/RFA
ရန်ကုန် - မန္တလေးမြို့ရှောင်လမ်းဖောက်လုပ်စဉ် လယ်ယာမြေဧက ၁၇၀ ကျော် သိမ်းယူခံထားရတဲ့ နေပြည်တော် ပျဉ်းမနားမြို့နယ်က တောင်သူ ၂၈၀ ကျော်ကို အစိုးရက လျော်ကြေး ကျပ်သန်းပေါင်း ၃၅၀ ကျော် ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
လယ်နဲ့ ယာမြေ လျှပ်စစ်မီးပြုပြင်ရာမှ အမျိုးသားတစ်ဦး ဓာတ်လိုက်သေဆုံး
လျှပ်စစ်မီးလိုင်း ပြုပြင်သူတစ်ဦး တာချီလိတ်ရှိ စားသောက်ဆိုင် တစ်ဆိုင်တွင် ဇွန်လ(၂၈)ရက်နေ့၊ ညနေ(၃)နာရီဝန်းကျင်က မီးလိုင်းများ ပြန်လည်ပြုပြင်စဉ် လျှပ်စစ်ဓာတ်လိုက်၍ သေဆုံးမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း
တာချီလိတ်မြို့ မယ်ခေါင်ရပ်ကွက်ရှိ Club7 စားသောက်ဆိုင်အား ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန်အတွက် ဆိုင်တွင်းရှိ လျှပ်စစ်မီးလိုင်းများအား ပြုပြင်ရန် မီးလိုင်းပြုပြ
Posted: 28 Jun 2016 05:41 AM PDT
ဇွန်လ (၂၈)ရက်နေ့ ခုလေးတင်ဖြစ်သွားတာ (၅၅ လမ်း မန်းလေး )အိမ်ရှေ့ မှာပဲ...
ဘယ်ချိန်က ချောင်းပြီး လိုက်လာမှန်းမသိဘူး ဒမြနှစ်ယောက် ဆိုင်ကယ်နဲ့ ပဲ မောင်းနေရင်း လွယ်ထားတဲ့ အန်တီ့ အိတ်ကို လုတာ ဆိုင်ကယ်လဲသွားတော့ လည်ပင်းက ဆွဲကြီုးကိုထပ်ဆွဲပြီး ထွက်ပြေးသွားပါတယ်။ ပိုက်ဆံ သုံးသိန်းကျော် ဖုန်း ဆွဲကြိုး တစ်ကျပ်သား
ဆွဲသီးက တော်သေးတယ် ပြတ်ပြီး ကျန်ခဲ့တယ် နှစ်ကျပ်သား ကျော် တယ် ...
လူကတော့ ပွန်းပဲ့ ဒဏ်ရာ ရပြီး
Posted: 28 Jun 2016 05:32 AM PDT
ယနေ့ ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့ ညနေ ၃ နာရီချိန်ခန့်တွင် ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနှင့်ေ၇ွှစည်းခုံလမ်းထောင့်ရှိမီးပွိုင့်အား တိုယိုတာကိုရိုလာမောင်းနင်လာသူတစ်ဦးမှ အရှိန်လွန်ကာတိုက်မိခဲ့ပြီး ကျောင်းသူတစ်ဦးကိုပါထိခိုက်မိခဲ့ပါသည်။
၎င်းနောက် အဆိုပါကားသည် ဆက်လက်မောင်းနှင်သွားရာ ရွှေစည်းခုံလမ်းမပေါ် အလက(၃)နှင့်မျက်စောင်းထိုး၊ စိန်မေရီဘုရားကျောင်းရှေ့အရောက်တွင် လမ်းဘေးရှိရေမြောင်းအုတ်ခုံနှင့်လျှစ်စစ်မီးတို
Posted: 28 Jun 2016 05:25 AM PDT
ဘယ်လိုလုပ်ကြမတုန်း ဒီ Bus ကားတွေကို မြေနီကုန်း Dagon Center ရှေ့ Shwedagon ဘုရားဘက်သွားတဲ့ ကားဂိတ်တွင် မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန် ၂ မိနစ်ခန့် ယာဉ်၂ထပ်ရပ်၍ လူတင်နေသာ ၁၀၇ လိုင်းမှ 1H-7412 နှင့် ၃၄ လိုင်းမှ 7D-1451 ။
ထိုကားများရဲ့ ဘေးမှာ ၃ထပ်ပြည့်အောင်ထပ်ရပ်တဲ့ မေတ္တာလှိုင်း ၄ နောက်ကကားများက ဟွန်တီးသော်လည်း ကားမထွက်ပေးပါ။ လမ်း/ပန်း ဝန်ကြီး ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူပေးစေချင်။
ခရစ်ဒစ် - မူရင်း
Posted: 28 Jun 2016 05:16 AM PDT
June 27. DNJ
စစ်တွေမြို့မှ ဘူးသီးတောင်သို့ပို့ဆောင်မည့် မူးယစ်ဆေးဝါးများအား စစ်တွေမြို့ အမှတ် (၂) ဘုတ်ဆိပ်ဝင်းတွင် ဇွန်လ (၂၇)ရက်နေ့ ညနေ ၃ နာရီကျော်အချိန်ခန့်က ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကာလတန်ဖိုးအားဖြင့် ၁ ပြားကို ၃ ထောင်ခန့်ရှိသော WY မူးယစ်ဆေးပြား ၇ သိန်း ၉
သောင်းကျော်ခန့်အား စစ်တွေမြို့ ကျေးပင်တန်းရပ်ကွက်မှ ကျော်သူလင်း(၂၄ နှစ်)က ဘူးသီးတောင်သို့ ပို့ဆောင်ရန် စီစဉ်နေခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ၄င်းအား
Posted: 28 Jun 2016 05:04 AM PDT
Iceland ​နိုင်ငံဆိုတာ ​လူဦးရေ ​သုံးသိန်းသာ ​ရှိတဲ့ ​နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ​နိုင်ငံတကာ ​ဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာ ​ပထမဆုံးအကြိမ် ​ပါဝင်ယှဉ်ြ
Posted: 28 Jun 2016 04:57 AM PDT
စာမေးပွဲ လိမ်လည် ဖြေဆိုခဲ့မှုဖြင့် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည့် အိန္ဒိယ မိန်းကလေးအား တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ- အင်တာနက်)
နယူးဇီလန်၊ ဇွန် ၂၈ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ဘီဟာပြည်နယ်တွင် စာမေးပွဲ၌ အမှတ်အများဆုံး ရရှိခဲ့သည့် အသက် ၁၇ နှစ် အရွယ် မိန်းကလေး တစ်ဦးအား ပြန်လည် စစ်ဆေးခဲ့ရာတွင် စာမေးပွဲ လိမ်လည် ဖြေဆိုခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရသဖြင့် အိန္ဒိယ ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဘီဟာ ပြည်နယ်တွင် ကလေးနှင့် တမူးမြို့တွင် အလှူခံနေသည့် ရသေ့ဟန်ဆောင်သူနှစ်ဦးအား ဖမ်းဆီးကာ ထောင်ဒဏ်နှစ်နှစ် ချမှတ်
Posted: 28 Jun 2016 04:42 AM PDT
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေးမြို့နှင့် တမူးမြို့တို့တွင် ရသေ့ဟန်ဆောင်၍ လှည့်လည် အလှူခံနေသူ နှစ်ဦးကို ဇွန်၂၇ ရက်တွင် တမူးမြို့၌ ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး တမူးမြို့နယ်တရားရုံးမှ ထောင်ဒဏ်နှစ်နှစ်စီ ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
“ရသေ့အယောင်ဆောင်ပြီး အလှူခံသူနှစ်ဦးကို ပုဒ်မ၂၉၅-က၊ သာသနာညိူးနွမ်းမှုနဲ့ တမူးမြို့နယ် တရားရုံးမှာ တရားစွဲခဲ့တယ်။ ဇွန်၂၇ရက်မှာ စွဲချက်တစ်ခါတည်းတင်
Posted: 28 Jun 2016 04:38 AM PDT
ယခုဖော်ပြထားသည့် ဓါတ်ပုံ မှာ နမူနာဓါတ်ပုံသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရသူ၏ ပုံမဟုတ်ပါ။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဖောင်းပြင်မြို့နယ်၊ ယားပင်ကျေးရွာတွင် ဆယ်ကျော်သက် မိန်းမပျိုလေးတစ်ဦးအား ပထွေးဖြစ်သူမှ သားမယားအဖြစ် အကြိမ်ကြိမ်ပြုကျင့်မှုကို မိခင်မှ ဖောင်းပြင်မြို့မရဲစခန်းတွင် ဇွန်၂၇ ရက်၌
"အမှုဖွင့်ထားပြီးပါပြီ။ တရားခံလည်း ဖမ်းမိပြီးပါပြီ။ လောလောဆယ် ရမာန်ယူထားပါတယ်။ ကလေး
Posted: 28 Jun 2016 04:28 AM PDT
တရုတ် နိုင်ငံ အတွင်းမှာ တေးဂီတ ဖျော်ဖြေ ပွဲတွေ လုပ်ဖို့ အတွက် အခွင့်အရေး နည်းပါး သွားပြီလို့ ဝေဖန် နေ
နာမည်ကြီး အဆိုတော် လေဒီ ဂါဂါ ဟာ တိဘက် ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်းလားမား နဲ့ တွေ့ဆုံ ခဲ့တဲ့ အတွက် တရုတ် ပရိသတ်တွေက ဒေါသတကြီး တုံ့ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေ နေ့က တိဘက် ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်း လားမား နဲ့ လေဒီ ဂါဂါ
တို့ ရဲ့ တွေ့ဆုံမှု ကို လေဒီဂါဂါက က လူမှု ကွန်ယက် စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်ခဲ့တာ ဖြစ်
Posted: 28 Jun 2016 04:26 AM PDT
ရုရှ လုံခြုံရေး တွေဟာ သံတမန်တွေရဲ့ နေအိမ်ထဲကို ဝင်ရောက်ပြီး ပစ္စည်း တွေကို နေရာ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း နဲ့ အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်တွေကိုလည်း သတ်ဖြတ်မှုတွေ ပြုလုပ်
အမေရိကန် နဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေက သံတမန်တွေကို ရုရှ လုံခြုံရေးတွေက အနှောင့်အယှက်ပေး မှုတွေ ပြု လုပ်နေကြောင်း အမေရိကန် တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦး က ပြောပါတယ်။
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဂျွန်ကယ်ရီ နဲ့ ရုရှ သမ္မတ ဗလာဒီမီယာ ပူတင်
တို့ အကြားမှာ အဆိုပါ ကိစ္စေ
မိမိတို့ အစိုးရအနေနဲ့လျှို့ ဝှက် ရည်မှန်းချက်များ မရှိ Posted: 28 Jun 2016 04:20 AM PDT
မိမိတို့ အစိုးရအနေနဲ့လျှို့ ဝှက် ရည်မှန်းချက်များလည်း မရှိကြောင်း၊ စစ်မှန်တဲ့ မိမိတို့၏ ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများ အားလုံး ချမ်းချမ်းသာသာ ငြိမ်းငြိမ်း ချမ်းချမ်း နေနိုင်သည့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို
ထူထောင်ဖို့ဆိုသည့် ရည်ရွယ်ချက် သာ ရှိကြောင်း၊ လက်ရှိအစိုးရ ဖော်ဆောင်နေသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ကြောင့် ပြောင်းအလဲများနှင့် ကြုံတွေ့လာလျှင်လည်း စိုးရိမ်ပူန်ခြင်း မရှိကြရန် တိုင်းရ
တက်တက်ကြွကြွလုပ်ဆောင်လျှင် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် မုချ အောင်မြင်မည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြား
Posted: 28 Jun 2016 04:05 AM PDT
Photo-ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံပွဲမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာစဉ်
“နောင်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် ကျွန်မတို့ထားပစ်ခဲ့ရမယ့် အကောင်းဆုံးအမွေအနှစ်ဆိုတာကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးပဲလို့ ခံယူထားပါတယ် …”
ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တက်တက်ကြွကြွဖြင့် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဆိုပါက မုချအောင်မြင်မည်ဟု နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ယနေ့ (ဇွန် ၂၈) Horizon Lakeview Resort တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့-၈ ဖွဲ့နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် တွေ့ဆုံ
Posted: 28 Jun 2016 04:03 AM PDT
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၈ ဖွဲ့နဲ့ ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့က နေပြည်တော် The Horizon Lake View ဟိုတယ်မှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်။ Photo - Win Ko Ko Latt/RFA
နောင်မျိုးဆက်တွေအတွက် ချန်ထားပေးရမယ့် အကောင်းဆုံးအမွေဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်တယ်လို့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တိုင်းရင်းသား အသနားခံစာတင်မယ်လို့ ရိုးရိုးလေးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ပြော
Posted: 28 Jun 2016 06:27 AM PDT
ရိုးရိုးလေးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ဦးနေထက်သိန်းနိုင် ကို တွေ့ရစဉ်
ကျိုက်ထီးရိုးတောင်ပေါ်မှာ အစိုးရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ထက် အခန်းပေါင်း ၁၀၀ ကျော် ဆောက်ထားတဲ့ ရိုးရိုးလေးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်က အဲဒီအခန်းတွေကို ဆက်လက်ထားရှိခွင့်ပေးဖို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတ နဲ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထံ အသနားခံစာ တင်ပြသွားမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဖျက်သိမ်းလိုက်ရင် နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေ ရှိလာနိုင်တဲ့အတွက် အသနားခံစာတင်မှာဖြစ်တယ်လို့ ရိုး
Posted: 28 Jun 2016 03:56 AM PDT
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD က ရွေးချယ်လိုက်သည့် ပြည်ထောင်စုအဆင့်နှင့် တိုင်းအဆင့် ပုဂ္ဂိုလ်အချို့ အောက်ခြေလွတ်နေကြောင်း NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းထိန်က ပြောကြားသည်။
ဇွန် ၂၇ ရက်နေ့က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၌ ပြုလုပ်သည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တွေ့ဆုံပွဲ၌ ဦးဝင်းထိန်က အထက်ပါအ
ကိုလံဘီယာ တွင် စစ်ရဟတ်ယာဉ် ပျက်ကျမှု ကြောင့် ၁၇ ဦး သေဆုံးကြောင်း စစ်တပ် အတည်ပြု Posted: 27 Jun 2016 09:48 PM PDT
ကိုလံဘီယာနိုင်ငံ စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Alberto Jose နမ္မတူမြို့နယ် အတွင်းရှိ RCSS/SSA အား အစိုးရတပ်မတော် စစ်ကြောင်း ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်
Posted: 27 Jun 2016 09:44 PM PDT
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကျောက်မဲခရိုင် နမ္မတူမြို့နယ်အတွင်း လှုပ်ရှား သွား
လာနေသည့် သျှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSS/SSA စစ်ကြောင်းအား အစိုးရ တပ်မတော် စစ်ကြောင်းက အင်အားအလုံးအရင်းဖြင့် ယမန်နေ့ ဂျွန် ၂၇ ရက် နံနက်ပိုင်းက ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။
၂၀၁၆ ဂျွန် ၂၇ ရက် နံနက်ပိုင်းက သိန္နီမြို့ အနောက်ဘက်၊ နမ္မတူမြို့ မြောက် ဘက်ခြမ်းဒေသ မိုင်းမော်နှင့် မိုင်းတတ် ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း လှုပ်ရှားနေ သ
Posted: 27 Jun 2016 09:32 PM PDT
28.6.2016 ကရင်ပြည်နယ် ကော့ကရိတ် နှင့် ညီနောင်ကြား ကွမ်းသီးတောအဆင်း မရောက်ခင် အပေါ်ကွေ့ အဆင်းတွင် ယာဉ်အမှတ် 7K/3954 ဒေါင်ဖန်း အမျိုးအစား တွဲကား အဆင်းကွေ့ အရှိန်မထိမ်းနိုင်ဘဲ ဘေးဘောင်လမ်းကာနှင့် တိုက်ပြီး လမ်းပေါ်ကန့်လန့် ဖြစ်နေပါတယ်။
ကားခေါင်းဘေးမြောင်းထဲကျပြီး ကားခေါင်းပိန်ချိုင့် ကာ ကားဒရိုင်ဘာ ညှပ်မိတာကြောင့် ဗိုက်ပေါက် - ခေါင်းထိခိုက် ဒဏ်ရာရသွားပါတယ်။
ဒရိုင်ဘာအမည် ကိုမြင့်သိန်းအောင် ၄၀